Become a Donor | Good Counsel L.C.
Taariikhda Xarunta Wax Barashada
Gabdhaha Iskuulka ee Notre Dame
Teknolojiyada iyo Barashada Fogaanta
Deeq-bixiyeyaasha La Raadinayo
Waxaan raadineynaa deeq bixiyeyaasha doonaya inay qabtaan wax u dhigma hamigooda iyo danahooda. Tani maahan wax sanadle ah. Waa wax maalin kasta, toddobaad kasta, bil kasta, sannad kasta wax. Waa xiise nololeed. Ma laha xuduudo waqti mid gaagaaban ama mid dheer. Waxay ku saabsan tahay wax ka qabashada baahida taas oo ka dhigaysa iyaga inay dareemaan inay adduunka ka dhigeen meel wanaagsan.
Arrimo badan oo ku saabsan bixinta canshuuraha waa kuwo aad u adag oo u baahan fiiro gaar ah. Garyaqaannada iyo khubarada canshuuraha ayaa awood noo leh inay kaa caawiyaan inaad hindiso habka ugu wanaagsan ee laguugu deeqo macno kuu samaynaysa. Hadday tahay aaminaad gaar ah ama warqad lahaansho, waxaan leenahay khabiir ku caawinaya.
Avoid capital gains by giving shares of stock or truckloads of grain
Donate land, royalties, and passive income streams
Donate bitcoin or cryptocurrencies
Meesha deeqdaadu aadi karto
Deeq bixiyeyaal badan ayaa raba inay ka faa'iideystaan qayb ka mid ah Xarunteena Waxbarshada haddii ay tahay barnaamijka deeqda waxbarasho ama barnaamijka Fidinta Qaxootiga. Waxaan u habeyn karnaa hadiyadaada si aan u taageerno aagga aad dareento inay ugu muhiimsan tahay.
Xarunta Talo Bixinta La-talinta Wanaagsan waxay hadda ka shaqeyneysaa sarkaal tiknoolajiyad waqti dhiman ah si ay uga caawiso macallinka iyo jadwalka jadwalka oo ay weheliso aaladaha iyo foomamka websaydhka, bogagga warbaahinta bulshada iyo cusbooneysiinta loo baahan yahay si looga dhigo qaabkeenna isgaarsiinta mid cusub. Ku deeqahaagu waxay taageeri doonaan ballanqaadkeenna joogtada ah ee ku aaddan u adeegidda ardaydeena, waalidiinteen iyo deeq-bixiyeyaasha maaddaama baahiyaha is-gaarsiinta la buuxiyay Maalgelinta kombuyuutarrada iyo qalabka durugsan si loogu oggolaado macallimiinta iyo ardaydooda inay u sii fogaadaan himilooyinkooda waxbarasho.
Sanduuqa deeqaha waxbarasho
Qaar badan oo ardayda ka mid ah ma awoodaan inay iska bixiyaan waxbarashada Xarunta Waxbarashada. In kasta oo $ 25 saacaddii waxbariddu ka hooseyso inta badan khidmadaha macallimiinta ee ay ka qaadaan shirkadaha kale, duruufaha ardayda dib uga dhigay waxbarashadooda ayaa inta badan ku bilaabma faqri iyo agab la'aan. Marka, waxaan diyaarinay sanduuq gaar ah oo aan ku siinno kuwa sida ugu badan ugu baahan, kheyraad ay ku kalsoonaan karaan inay ka caawiyaan bixinta waqtiga fasalkooda.
Kafiil Arday Cunug
Ugu yaraan $ 50 doolar bishii waxaad ku caawin kartaa arday u baahan. Waad ku caawin kartaa iyaga oo bixiya qayb ka mid ah waxbarashadooda. Dhammaan ardayda iyo qoysaska waxaa looga baahan yahay inay bixiyaan qayb ka mid ah dakhliga soo gala xagga waxbarashadooda.
Waxaad ku taageeri kartaa shaqsi ama qoys dariiqa ay ku joogaan sharciga soogalootiga. Sharciga cusub ee Socdaalka ee loo soo bandhigayo Congresska Federaalka hada wuxuu ka caawin doonaa kuwa halkan jooga USA inay noqdaan muwaadin sharci ah
Marka dumarka soo galootiga ah qaarkood ay yimaadaan Mareykanka, waxay u badan tahay inaysan wax baran. Caadooyinka iyo sharciyada dalalka kale ayaa aad ugu xun waxbarashada haweenka waxaana loo baahan yahay baahi aad u sareysa in laga caawiyo haweenka soo galootiga ah iyo kuwa qaxootiga ah inay noqdaan dad wax akhriya waxna qora si ay ugu biiriyaan qoysaskooda halganka si ay uga gudbaan duruufahooda cusub.
wasaarad ku xiran
170 Wadatashi Wanaagsan